III Nzukọ Kwa Afọ nke Inter-American Network of Land Registry na Land Registry - Geofumadas
III Nzukọ Kwa Afọ nke Ngalaba Cadastre na Land Registry
Nọvemba, 2017 cadastre
Uruguay, site na National Directorate nke Cadastre na General Directorate of Regries, ga-abụ mba nnabata nke “Nnọkọ Mmepe Nke III nke Inter-American Network of Cadasters na Ngwongwo Ngwongwo A ga-enwe n'obodo Montevideo, n'etiti 14 na November 17 nke 2017 na nke ahụ ga-ewere ọnọdụ na Radisson Hotel.
Ejikọtara Ala na Nkwado Ala Ntanetị Inter-American, nke emepụtara na 2015 afọ, nwere ebumnuche bụ isi iji kwalite mmebi nke astlọ Akwụkwọ Cadastre na Land Registry nke Latin America na Caribbean dị ka otu n'ime ngwaọrụ nchịkwa ọha. njedebe nke mmelite nke ọchịchị onye kwuo uche ya na mmepe akụ na ụba.
Interconnection nke ozi n'etiti ndị Land ndekọ na ndekọ na-enye nkenke na n'aka na ezigbo ala na ụlọ ya na ahụ na iwu ya kwadoro na-ebute ihe onwunwe ikike, Ọrụ onwunwe azụmahịa, consolidating ndị ziri ezi ikike na-egbochi esemokwu.
Ọ bụkwa ihe dị irè usoro megide inequality ma na-enye geo-referenced data akụrụngwa na ókèala maka a mma obibia nke na-amụba asian ọha iwu na ọ ga-emezu ihe mgbaru ọsọ nke na-adigide mmepe. Cadastre na-enye ihe onwunwe nke ihe onwunwe.
Ihe ndekọ ahụ na-enye ohere ịmara eziokwu nke iwu site na ịdenye aha iwu ndị na-ezo aka na ala ahụ a maara nke ọma.
Onye nwe ihe onwunwe nwere ikike, na-emesi ikike nke na-enyefe ikike, na-enye ohere ịbanye na ala ahụ na-ere ahịa ụlọ ahịa n'ezie ma nweta ezigbo ego maka nnyefe. Ọrụ Ndịozi na contracts banye na mmekọrita onwunwe bụ isiokwu tax, nke pụtara ihe ego maka ala, ego nke ga-emesịa enyefe ndị dị iche iche na aku na uba ụlọ ọrụ nke mba. Ulo oru nke ndi mmadu na-abanye n'ime oru nke ma na ala ndi mmadu na steeti choro onodu aku na uba onodu aku na uba, mmepe ya na ulo oru mbo abughi nani site na mba di iche iche kamakwa site n'aka ndi ozo ndi ozo.
Ọ na-enye ohere mgbalị nke dị iche iche na-eme ihe nkiri, mepụta ala regularization, na ebumnuche nke rụọ ọrụ àgwà nke ndụ nke bi, na-akwalite ahụ na-elekọta mmadụ mwekota n'ime ndị mepere emepe na gburugburu ebe obibi. Ọ na-achọ iji belata nsogbu, irube ọchịchị atumatu iji na mbenata mepere emepe ogbenye; akwalite mgbanwe atụmatụ ụkpụrụ na ọhụrụ institutional usoro na ụlọ oru ma si otú na-akwalite ọkọnọ nke developable ala, na ọnụ ụlọ, inwe mmekọrịta ọha na eze na nkịtị nwe, eke agbata na otú nweta na-elekọta mmadụ mwekota.
Atụmatụ ọrụ ahụ nwere ụbọchị na ọkara nke ọgbakọ mepere emepe na ụbọchị nzukọ nke ndị isi. N'ime ogbako a na-emeghe, a ga-atụle anọ dị mkpa maka ọganihu nke Cadasters na ndebanye aha na ụwa niile na mgbe a ga-eme mgbakọ ahụ, a ga-eme mgbalị iji kwalite nchịkọta nke NETWORK site na nkọwa nke atụmatụ ọrụ maka Afọ 2018, yana nchọta maka ọgwụgwọ nkwonkwo nke nsogbu mpaghara na ịkọwapụta otu nzube
• Mgbakọ: Mkpa nke Cadastre na Ndebanye aha Ngwongwo na mmepe akụ na ụba na mmekọrịta mmekọrịta nke mba dị ugbu a na nchịkwa ókèala.
• Mgbakọ: Ọchịchọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka ọgbọ nke mpaghara na-akwado nkwalite nke Cadastre na Ndenye aha Ngwongwo.
Nọvemba nke 14
20: 00 Anabata Cocktail na ezumike, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel (site na oku)
Nọvemba nke 15 - Nnukwu Mgbakọ - roomlọ Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza.
08: 30 - 09: 15 Ndebanye aha ndị sonyere
09: 15 Iwu mmeghe National Directorate nke Cadastre, General Directorate of Registries, OAS, Ndị isi obodo na otu dị iche iche.
10: 00 Isi okwu
10: 45 Agbaji
11: 15 Oge nke 1. Ihe mgbochi 1: Ọganihu nke Cadastre na Ndị Ndebanye aha na oge ọchịchị gọọmentị dijitalụ.
12: 15 Oge nke 1. Ihe mgbochi 2: Ọganihu nke Cadastre na ndekọ na oge ọchịchị gọọmentị dijitalụ.
13: 15 Nri ehihie (site na ikpo oku).
14: 30 Oge nke 2. Ihe Ntugharị 1: Mmalite nke cadastral na mmetụta ya na ndebanye aha.
15: 15 Oge nke 2. Ihe Ntugharị 2: Mmalite nke cadastral na mmetụta ya na ndebanye aha.
16: 00 Agbaji
16: 30 Nnọkọ 3: Ihe gbasara Cadastral na ndekọ ndekọ: usoro ihe a na-ahụkarị maka nhazi ala na atụmatụ ime obodo.
18: 00 Mechie ụbọchị.
20: 00 Nri abalị.
Nọvemba nke 16 - Nnukwu Mgbakọ - roomlọ Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza.
09: 00 Oge nke 4. Ihe ngbanwe nke 1: Ntinye na mmetụta nke Cadastre na Ndebanye aha na Infrastructure data Spatial.
09: 45 Oge nke 4. Ihe ngbanwe nke 2: Ntinye na mmetụta nke Cadastre na Ndebanye aha na Infrastructure data Spatial.
10: 30 Mgbanwe
11: 00 Ahụmahụ ndị nwere mpaghara na usoro dị iche iche nke nchịkwa ókèala.
12: 00 Oge 5: Mmechi.
12: 45 Ndị na-ahazi emechi.
13: 00 Imechi - Nri ehihie (site na oku).
November 16 - Nzukọ Kwa Afọ Kwa Afọ - Ime ụlọ Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
14: 30 Mmepe Iwu Na-anabata Mmepe na Mkụnye Mgbakọ:
• OAS (okwu mmeghe)
Mike Mora, Odeakwụkwọ nka na ụzụ, Inter-American Land Registry na Land Registry Ngalaba maka Ihu Ọha nke Ọma, OAS
• Onye isi oche NETWORK
Akwụkwọ ikike Carlos González, onye isi nchịkwa nke ala ala nchịkwa ikike nke Panama (ANATI)
• ọbịa (nnabata)
Sylvia Amado, onye isi ala nke Cadastre nke Uruguay, yana Esc Adolfo Orellano, Onye isi oche ndị na-edebanye aha na Uruguay.
• Ọkachamara Nka na ụzụ (nwụnye ọgbakọ)
- Readinggụ nke Nkeji
- Ngụgụ nke Agenda
15: 30 Foto nke Mgbakọ - Recess.
16: 00 Okwu mkparịta ụka: Ndị otu RED.
18: 00 Mechie
19: 00 Nri abalị n’efu
November 17 - Nzukọ Kwa Afọ Kwa Afọ na-aga n'ihu - roomlọ Ballroom, Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
08: 00 Njikwa netwọkụ:
• Akụkọ Nzuzo Nzuzo 2016-2017
• Dekọwapụta atụmatụ ọrụ nke 2017-2018 Network
• Ndị otu ha (Ọrụ nka na ụzụ)
• Ntuli aka nke ndi isi
• Isi okwu 2018
• ịtụ vootu gbasara ihe niile gbasara ndị otu
11: 00 Mgbanwe
11: 30 Nnye ndị asambodo nye ndị nnọchi anya ha.
11: 45 Mmechi okwu
• Ọkachamara Nka na ụzụ
• Onye ọbịa
• Onye isi oche ahọpụtara
12: 00 Na-emechi
12: 30 Mbula gaa Punta del Este - Nri ehihie na njem na ebe ndị njem.
20: 00 Laghachi na nkwari akụ na Montevideo.
Kpọ òkù ka ndị ọrụ mmemme ihe owuwu maka ọganịcha nke ndị isi ala nke Republic (Ọrụ maka ndị ọbịa mba ụwa)
November 14 - Onye isi oche ndị isi oche - Plaza Independencia
9: 00 rue 13: 00 hs: Amphitheater - Ojiji iji ihe omuma banyere uzo - IDEUy.
14: 00 rue 17: 00 hs: Ngwongwo nke otutu - ihe omuma banyere uzo ochichi nke obodo - IDEUy.
Maka ozi ndị ọzọ, lee ihe omume mmemme.
Previous Post«Previous BIM Ọganihu - Nchịkọta Nzukọ Kwa Afọ
Next Post Geofumadas na-agwa gị ka ị mara akwụkwọ ndị dị n'Ịntanet n'ọdụ ụgbọ mmiri IGN Spain!Next »